Posted by Tranquillus | Mar 7, 2020 | wax soo saarka
Haddii aadan lahayn nidaam cad oo aad ku maareynaysid emaylkaaga, waxay si dhakhso leh u noqon karaan isha waqti lumis badan. Dhanka kale haddii aad sameyso waxa lagama maarmaanka u ah heerka abaabulka si aadan u oggolaan naftaada in ay kugu wareegaan daraasiin emayl ah oo aan akhrin. Markaa maskaxdaada waad ka xorayn kartaa suurtagal kasta oo ah inaad weydo emayl muhiim ah. Qodobkaan waxaa ku taxan dhowr howlo la xaqiijiyay. Markaad korsato iyaga, waxaad xaqiiqdii awoodi doontaa inaad si xasilan u maamuli karto sanduuqaaga boostada.
Si otomaatig ah ama gacantaada u kala sooci emayl kasta oo ku jira gal kaydsan ama faylal hoosaad.
Kani waa nooca habraaca kuu oggolaanaya inaad si dhakhso leh u kala soocto emaylkaaga sida ugu muhiimsan. Waad dooran kartaa inaad kala soocdo emaylkaaga mawduuc, mowduuc, waqtiyada kama dambeysta ah. Waxa muhiimka ah waa in laga wada faa’iideysto astaamaha ee sanduuqaaga boostada si aad ugu maamusho waraaqahaaga qaab hawlgal buuxa ah. Mar alla markii aad sameysato tusaha galka iyo galka hoose sida ku xusan habka ururka ee kugu habboon. Farriin kastaa waxay booskeeda ku yeelan doontaa sanduuqaaga boostada sida feyl kasta oo warqad ah miiskaaga. Marka, mar haddii xilligu dhammaaday si loo farsameeyo emaylladaada, waxaad xoogga saari kartaa 100% inta ka hartay shaqadaada.
Qorsheyso waqti cayiman oo ku saabsan ka baaraandegista emaylkaaga
Dabcan, waa inaad ahaato mid jawaabaya oo aad awoodid inaad socodsiiso farriimaha kaa suga jawaab deg deg ah adiga kaaga yimaada. Inta hartay, qorshee waqtiyada (yada) ugu habboon, si aad ula macaamilid emaylkaaga hab joogto ah. Ka bilow adoo diyaarinaya dhamaan waxyaabaha lagama maarmaanka u ah howshaada. Faylasha waraaqaha, xaragada, daabacayaasha, wax walba waa inay ahaadaan kuwo diyaar u ah inay fududeeyaan u fiirsashada ugu badan. Wax dhib ah maleh markii aad doorato. Maaddaama ay sanduuqa boostadaadu u habaysan yihiin sidii xarun lagu kala sooco boostada, waxaad fursad u leedahay inaad si deggan ugula socodsiiso emaylkaaga si hufan oo xawaare ah.
READ Adeegyada ugu fiican ee internetka loogu diro faylasha waaweyn oo aan diiwaangelin.
Nadiifi santuuqa boostada adiga oo tirtiraya dhammaan joornaalada aan loo baahnayn
Sanduuqa boostaagu had iyo jeer ma quudhsadaa wargeysyada aan xiiseyneyn ama xayeysiinta? Ka taxaddar inaad ka tirtirid sanduuqa boostada dhammaan waraaqo-wareedyadaan oo aad ugu eg spam sidii waxkastoo kale. Waa inaad si nidaamsan uga saarto dhamaan liisaska waraaqaha kuwaas oo aan kuu keenin wax la taaban karo oo dhaqso u noqon kara sumcad. Waxaad isticmaali kartaa aalado sida Nadiifo halkaas oo Iska qor Samee daruuriga ah dhowr dhagood. Iyada oo aan subax kaa qaadin, xalka noocan ahi wuxuu kaa caawin doonaa inaad si weyn u caawiso inaad joojiso dhammaan wasakhda dijitaalka ah. Kumanaan emayl ah si dhakhso leh ayaa looga hawlgalin karaa.
Diyaarso jawaab toos ah
Goor dhaw ayaad fasax tegi doontaa fasax dheer. Faahfaahin aan la iloobi karin, ayaa la socodsiiyay jawaabta otomaatig ee sanduuqaaga boostada. Tani waa wax muhiim ah sidaa darteed dhammaan dadka aad xirfad ahaan ugula xiriirto emayl ahaan si wanaagsan ayaa loogu wargelinayaa maqnaanshahaaga. Isfaham la'aan badan ayaa suurtagal ah marka macaamil ama alaab-qeybiye uu lumiyo sabarka, maxaa yeelay fariimahan wali jawaab kama uusan helin. Tan waxaa si fudud looga fogaan karaa farriin gaagaaban oo si otomaatig ah loogu diri doono xilliga fasaxaaga. Kaliya waxaad u baahan tahay inaad tilmaamto taariikhda aad ka soo laabatay fasaxa iyo sababta aadan ugu soo diri e-maylka saaxiib wehelkaaga haddii loo baahdo.
Ka xanaaq tirada tirada e-mayl ee aad u dirto nuqul ahaan
Si habaysan iyadoo la adeegsanayo emayllada loo diro nuqul kaarboonka ah (CC) iyo kaarboonka aan la arki karin (CCI) waxay si dhakhso leh u abuuri karaan isweydaarsi aan dhammaad lahayn. Dadka ay ahayd inay helaan farriintaada macluumaadka, hadda waxay u baahan yihiin caddeyn. Kuwo kale ayaa la yaaban sababta ay u soo gaarsiiyeen farriintan oo ay si sax ah ugu fahmeen inay tahay waqti lumis. Markaad dooranayso inaad qof ku dhejiso loop, hubso in doorashadaadu runtii ku habboon tahay. Farriimaha loo diro qof kasta si kasta ha noqotee waa in laga fogaado.
READ Sidee loo abaabulaa goobta shaqada?
Xusuusnow in emaylku yeelan karo qiimo sharciyeed
Intii suurto gal ah xafid dhammaan emaylkaaga, waxay leeyihiin awood caddayn, gaar ahaan maxkamadda warshadaha. Farriin elektiroonig ah haddii ay kuxiran tahay isla qiimaha sharciga oo ah warqad aad gacanta ku qori lahayd. Laakiin iska jir, xitaa farriin sahlan diray isagoo aan fakarin saaxiib ama qof macaamil ah wuxuu yeelan karaa cawaaqib xumo. Haddii macaamilku caddeeyo, emaylku wuxuu leeyahay taageerada, inaadan ixtiraamin ballanqaadyadaada xagga gaarsiinta ama mid kale. Waxaad ubaahantahay cawaaqibta ganacsigaaga iyo naftaada. Khilaafaadka ganacsiga sida maxkamadaha warshadaha, caddeynta ayaa la sheegay inay tahay "bilaash". Taasi micnaheedu waa in garsooraha uu go'aansan doono oo ay ufiican tahay in si taxaddar leh loogu kala saaro emaylkiisa halkii aad qashinka ku ridi lahayd.
U maaree boostadaada si wax ku ool ah May 17th, 2020Tranquillus
horeWaxaad u Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Fasaxa Gaarka Ah
socdaU diyaari farriinta maqnaanshaha tooska ah ee Fasaxyada